I-7 yolwandle oluhle emazantsi e-Itali | Iindaba Zokuhamba
I-7 yeelwandle ezilungileyo kakhulu kumazantsi e-Itali
Susana Garcia | | Iindawo ezibalekayo eYurophu, ngokubanzi, Italia, Iilwandle
Xa imozulu entle ifika sele sivakalelwa ngathi lulwandle, kwaye kuba abo bakummandla wethu sele besaziwa, sifuna ukuphupha ezinye iilwandle zeendawo ezinomdla. Njenge I-7 iilwandle ezilungileyo emazantsi e-Itali. E-Itali akuyi kubakho kunqongophala kweelwandle ezintle nezasekuqaleni, kunye noLwandle lweMeditera ngasemva kunye nemozulu enomdla.
Qaphela ezi zilwandle, nangona siqinisekile ukuba zininzi ezinye. Ziibhanki zesanti ezimbalwa ezaziwayo, kodwa Unxweme lwase-Italiya kwaye iziqithi zizele ngamabhishi afanele ukulahleka kuwo. Okwangoku siza kubona inqanaba leelwandle ezisixhenxe esingathanda ukuzindwendwela namhlanje ukonwabela imozulu yeMeditera.
1 IScala dei Turchi eAgrigento, eSicily
2 UMarina Piccola eCapri
3 UMarina dell'Isola eTropea, eCalabria
4 ISpiaggia dei Conigli eLampusa, eSicily
5 ICala Rossa kwisiqithi iFavignana, eSicily
6 IBaia delle Zagare eGargano, ePuglia
7 UCala Spinosa eSanta Teresa Gallura, eSardinia
IScala dei Turchi eAgrigento, eSicily
Siqala ngenye yezona zithandwa kakhulu, eyaziwa ngalawa mawa amhlophe aqingqwe ngamaza nomoya, adale imilo ekhethekileyo, ngokungathi zizinyuko. Ingama lakho, 'Izinyuko zeTurks' Ivela kula mawa kwaye le yayiyindawo yokubalekela abaphangi baseTurkey kwiinkulungwane ezidlulileyo. Kunxweme lwaseRealmonte, kwiphondo laseAgrigento. Inesanti entle namanzi acocekileyo okuhlamba, kwaye ilitye lekalika elihlala phantsi elenza ukuba babe nalo mbala mhlophe mhle ngokuchaseneyo nolwandle. Ngoku iipirate azisazifihli kuyo, kodwa kufanelekile ukuchitha ixesha uzimele elunxwemeni, ulele ematyeni okanye esantini.
UMarina Piccola eCapri
Xa sithetha ngeCapri sikhumbula ukuba esi siqithi yayisisiphephelo sikaPablo Neruda, kodwa nesikhulu Iinkwenkwezi zaseHollywood ezivela kwi-50s, owafumana iparadesi egqibeleleyo kwesi siqithi sincinci. Ke ngekhe siphoswe zuluhlu lwethu lolwandle olukulesi siqithi sihle, indawo yokulwa iparazzi yabantu abadumileyo abavela kwelinye ixesha. Namhlanje iseyindawo ehloniphekileyo, nangona ingekuko njengakwiminyaka eyadlulayo, kodwa isadlulisa ikhubalo elifanayo. IMarina Piccola ikummandla waseCampania. Itheyibhile elincinci elikhuselwe ludonga lwamatye kunye neembono zamawa aphambi konxweme. Zininzi iindlela zokufika apho, kodwa eyona idumileyo kunye neyoqobo idlula ngeKrupp, indlela ejikelezayo yezinyuko.
UMarina dell'Isola eTropea, eCalabria
ILa Marina dell'Isola ibalasele ngokwakhiwa kwamatye kunye nokuba lulwandle lwedolophu kodwa liphupha. Kwiphondo laseVibo Valentia, kwi Tropea, eCalabria, lolunxweme olukhulu, oluphakathi kwe 'Isola Bella' kunye ne 'Playa de la Rotonda'. Imele ilitye elikhulu elingena elwandle kwaye lahlule ulwandle, apho icawa yaseSanta María de la Isla, ingcwele endala yaseBenedictine. Kwangelo xesha linye lokonwabela ulwandle oluhle, singonwabela isixeko saseTropea, esinezindlu ezijonge eliweni, nalapho sinokubona khona icawe enkulu yaseRoma.
ISpiaggia dei Conigli eLampusa, eSicily
Le yile 'Ulwandle lwemivundla' ukuba igama lakhe siliguqulela, kwisiLampusa. Inetyala layo kwisiqithi esiphambi kwayo, iIsola dei Conigli, kwaye ithathwa njengelinye lamabhishi amahle kakhulu emhlabeni. Ewe kufanelekile kuba yindawo eyintombi entle ngobuhle, enamanzi acwecwe ngekristale. Kufuneka kuthiwe ukufika apho kuya kufuneka uhambe umzuzwana ecaleni kwendlela kwaye ehlotyeni kuhlala kugcwele. Ekupheleni kwehlobo sinokubona nofudo kule ndawo ukuba sinethamsanqa.
ICala Rossa kwisiqithi iFavignana, eSicily
Le Cala Rossa yeka Ugcino lwendalo lweziQithi ze-Aegades, kwiSiqithi iFavignana. Indawo apho kwakukhutshwa khona ikwari, kwaye ngoku yindawo yabakhenkethi kakhulu. Ngoku ime emanzini ayo acace gca, anethoni eluhlaza kunye neethoni eziluhlaza kwindawo enkulu yokuhlamba okanye yokuntywila emanzini. Indawo ejikelezileyo yendalo apho unokuhambahamba kunye nokwakhiwa kwamatye kugqibezela ukunikezelwa kolu lonxweme lunomdla kwaye luhle.
IBaia delle Zagare eGargano, ePuglia
Ifumaneka kwi Ipaki yeSizwe yeGargano uya kuyifumana le bay. Kule bay, izinto ezininzi zigqamile, kwaye yindawo entle yendalo ekhangeleka indalo, nangona kunjalo, sele ikhenkethe ngakumbi kunangaphambili, kwaye ineeambrela elunxwemeni kunye nezinye iinkonzo. Ibalasele livumba leentyatyambo eziorenji kunye nokwakhiwa kwamatye asembindini wolwandle, athe akhiwa kukukhukuliseka kwamanzi nomoya, into esikhumbuza ngeelwandle ezinjengeLas Catedrales eLugo, eSpain.
UCala Spinosa eSanta Teresa Gallura, eSardinia
Kwidolophu yase Uvavanyo lweCapo uya kufumana iCala Spinosa, ulwandle olufikelelwe ziindlela ezinqabileyo. Into elungileyo malunga ne-Cove encinci kukuba ayinguye wonke umntu ozimiseleyo ukwenza umgudu wokufikelela kuyo, kodwa kufanelekile ukuba uyonwabele loo manzi acacileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » I-7 yeelwandle ezilungileyo kakhulu kumazantsi e-Itali
Iindawo ezili-10 eziseYurophu zokuchitha iiholide
Mojácar, indawo enomtsalane eAlmería